IPhone 6s Plus Dib u eegis | War gadget
Luis Padilla | | Mobiles, Reviews
Telefoonada cusub ee iPhones 6s iyo 6s Plus ayaa hada yimid Spain iyo Mexico mana dooneyno inaan seegno fursada aan ku falanqeyneyno casrigaan cusub ee Apple. Gaar ahaan kan ugu weyn, iPhone 6s Plus, oo leh shaashaddiisa 5,5-inji ayaa u yimid inuu sii wado inuu wajaho suuqa sii kordhaya ee dalbashada.
Kamaradeeda dambe ee 12 Mpx, 5 Mpx hore, shaashadda FullHD oo leh 3D Touch iyo Retina Flash cusub waa qaar ka mid ah isbedelada ugu muhiimsan ee jiilkan cusub ee IPhones. Waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta hoose iyo fiidiyoow aad ku arki karto shaqooyinka cusub ee ficilka ku jira.
1 Naqshad joogto ah
2 Awood badan, ismaamul isku mid ah
3 Hagaajinta kamarada
4 Sawirro Toos ah, noolee qabashadaada
5 3D Touch, oo ah kacaan ku dhexjira macruufka 9
6 IPhones cusub oo gudaha ah, isla banaanka ah
Naqshad joogto ah
Ahaanshaha runta, Apple wuxuu isbeddelada ku sameeyaa jiilkiisa «s» gudaha. Wax ka beddelka naqshadeynta iPhone 6s waa wax yar oo aan la aqbali karin. Aluminium la xoojiyay ayaa siinaya culeys ka badan jiilkii hore, gaar ahaan 20 garaam in ka badan (192 g) cabirkiisuna wuxuu kordhayaa 0,1mm laakiin wali waa la jaan qaadayaa guryaha moodooyinka hore. Marka lagu daro in lagu heli karo midab gaar ah "rose gold" oo loogu talagalay 6s iyo 6s Plus, waxaad ku kala sooci kartaa oo kaliya jiilkii hore "S" oo lagu xardhay dhabarka terminalka.
Awood badan, ismaamul isku mid ah
Qalabka cusub ee A9 ee IPhone 6s iyo 6s Plus waa laba "bahal" run ah oo ka sarreeya xitaa qaar ka mid ah laptop-yada hadda jira. Haddii tan aan ku darno taas Xusuusta RAM waxay u kacdaa 2GB natiijadu waxay tahay waxqabadka labadan terminaal ee cusubi waxay ku fiican yihiin hawl kastoo ay la kulmaan.
Baytariyada, si kastaba ha noqotee, waa laga dhammaaday xagga awoodda, laakiin kuma filna is-maamul.. Hagajinta hufnaanta processor-ku waxay xaqiijineysaa in nolosha batteriga ee iPhone 6s iyo 6s Plus cusub ay lamid tahay tii kuwii iyaga kahoreeyay, waana wax Apple ay ku hubiso boggeeda iyo in aragtidayada ugu horeysa ay xaqiijineyso. Ka imanaya 6 Plus ma aanan arag wax isbeddel ah marka laga reebo nolosha batteriga, maxaa intaa ka badan, iyada oo ay ugu wacan tahay nooca cusub ee iOS 9.1 xitaa waxaan dhihi lahaa in ay ka sarreyso.
Labada kamaradood ee IPhone-ka cusub ayaa la hagaajiyay. Kaamirada gadaal waxay aadeysaa ilaa 12 Mpx marka laga hadlayo iPhone 6s Plus sidoo kale waxay ilaalinaysaa xasiliyaha indhaha, wax ka duwan 6-da oo aan wali heysan. Ujeeddooyin wax ku ool ah isbeddelka lama dareemi karo, oo sawirrada laga soo qaaday iPhone 6 Plus iyo 6s Plus isla xaaladaha iftiinka ah waa isku mid. Kaamirada hore waxbadan baa iska badalay oo way muuqataa. Ayadoo la adeegsanayo 5 Mpx ee hadda jirta, wicitaanada fiidiyowga iyo sawir-gacmeedka ayaa gebi ahaanba ka duwan, oo leh tayo aad uga sareeya qaababkii hore. Apple sidoo kale waxay soo bandhigtay Retina Flash, oo shaashadda ka dhigaysa mid toos u qaadeysa sawirna u qaadaysa sidii Flash, waana wax natiijooyinka wanaagsan ku gaadha iftiinka yar.
Duubista fiidiyowga waxay hagaajineysaa awoodda lagu duubi karo fiidiyowga 4K, iyo inta lagu guda jiro duubisteeda waxaad ka qaadi kartaa sawirro 8 Mpx ah. Sidoo kale waxaa kujiran ciwaanka duubista fiidiyowga FullHD ee 120 fps. Astaamaha intiisa kale ee ku saabsan duubista fiidiyowga iyo dib u ciyaarista waxay la mid yihiin kuwa moodelladii hore.
Sawirro Toos ah, noolee qabashadaada
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee xiisaha lihi waa suurtagalnimada in la qaado sawirro xamaasad leh. Mar kasta oo aad sawir qaadatid, adigoon sameyn wax gaar ah, waxaad dhab ahaan duubi doontaa muuqaal yar oo fiidiyoow ah oo aad ku ciyaari karto mahadsanid 3D Touch. Sawirku wuxuu ahaan doonaa mid taagan, sida sawir kasta, laakiin markii aad si fudud shaashadda ugu riixdo wuxuu bilaabi doonaa inuu soo nooleeyo oo ciyaaro fiidiyowgaas yar iyo taxanaha maqalka ah. Sawiradan waxaa lala wadaagi karaa qalab kasta oo uu ku rakiban yahay iOS 9, kaas oo waliba ciyaari kara.
3D Touch, oo ah kacaan ku dhexjira macruufka 9
Waa cibaada ugu weyn ee iPhones cusub. Shaashaddaadu way ka duwan tahay moodellooyinkii hore iyo awood u leh inuu ogaado heerka cadaadiska aad ku saareyso. Nooc cusub oo ah Force Touch oo Apple ay ugu magac dartay 3D Touch iPhone-ka kaas oo kuu ogolaanaya inaad kula fal gasho qalabkaaga qaab cusub. Dhagsii astaan ​​oo dalabku wuu furi doonaa, xoogaa riix oo waxaad fursad uheli doontaa howlaha ugu caansan. Waxaad ku dhejin kartaa sawir Twitter-ka, wici kartaa xiriir ama si toos ah fariin uga soo qori kartaa boodhkaaga.
3D Touch sidoo kale waxay ku siisaa fursado badan barnaamijyada dhexdooda, sida loo eego emaylka sanduuqa sanduuqa, ku calaamadee sida u akhri ama u tirtirto, iyo waxaas oo dhan iyadoon loo baahnayn inay galaan. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda xiriiriyeyaasha ku jira websaydhka: waad ku eegi kartaa iyaga adigoo riixaya isku xidhka wax yar
Horumariyayaashu waxay si aad ah sharad ugu leeyihiin tikniyoolajiyaddan cusub waxaana jira durba codsiyo badan oo dhinac saddexaad ah oo aan ka heli karno App Store oo la jaan qaadi kara 3D Touch, tanina wali ma aysan samayn wax kale oo ay ku bilaabaneyso. Isla 3D Touch-kani waa midka kuu oggolaanaya inaad aragto muuqaal animation ah oo ah sawir aad uqeexday sida gidaarka shaashadda qufulka, ama xitaa galaangal badan ama barnaamijkii hore si deg deg ah adigoon riixin badhanka bilowga.
IPhones cusub oo gudaha ah, isla banaanka ah
Hawlaha cusub ee ay ku jiraan iPhones-kan cusub ee 6-da iyo 6-da ah ee Plus waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan dad badan, in kasta oo xaqiiqda ay isku muuqaal yihiin macnaheedu tahay in qaar kale oo badani u arkin isbeddelka soo jiidasho leh haddii ay hore u haysteen 6 ama 6 Plus. Imaatinka 3D Touch waa isbedel weyn oo ku yimid macruufka, in kasta oo kaliya bilowga isbeddelkan. Ma u qalantaa isbedelka? Kuwa ka yimid iPhone 5s ama ka horba waxay hubaal ka ogaan doonaan kala duwanaansho badan oo ku saabsan waxqabadka, batteriga, kamaradda iyo isdhexgalka, laakiin laga yaabee kuwa horey u haystay 6 ama 6 Plus mar uun raynrayntii isbedelka qalab cusub ay dhaafi doonaan. waa maxay runtii waxaa jira waxyaabo yar oo cusub oo ay ku qaban karaan aaladahaan cusub oo aysan ku qaban karin kuwii hore.
Qalab cusub oo A9 ah oo awood badan iyo 2GB RAM ah
Aluminium cusub oo xoojiyay
Waxaa la casriyeeyay kamaradda 12MP iyo 5MP oo leh duubista fiidiyaha 4K
Astaamaha cusub: 3D Touch iyo Sawirro Toos ah
Aqoonsiga Taabashada oo dhakhso badan oo lagu kalsoonaan karo
Sare u kaca qiimaha
Naqshad la mid ah qaabkii hore
Ma ciyaaro 4K inkasta oo uu awoodo inuu duubo
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Dib u eegida iPhone 6s Plus cusub
Dib u eegis aad u wanaagsan laakiin haddii aan doonayo inaan wax ka idhaahdo wax igu dhacay, waxaan beddelay iPhone-ka hal mar maxaa yeelay waan ka xanaaqsanahay waxa igu dhacaya oo way sii socotaa in kasta oo aan arko in Luis adigana kugu dhacay. Waxaa kuu soo baxaysa in markii aad iPhone xirto in muddo ah ama aad dhahdo 1 ilbiriqsi ama wax yar ka badan marka aad ku furayso farahaaga, baarka kor ku xusan halka uu waqtiga ku yaalo, batteriga iyo howlwadeenka ayaa baaba'aya waxayna qaadataa waqti in dib loo soo muuqdo. Waxaan u maleynayay inay noqon karto Chip maadaama tan ay ka timid Samsung ama iPhone-kayga uu khaldan yahay laakiin waxaan ku arkay fiidiyowyo halkaas ka jira oo ku saabsan waxa ku dhacaya youtubers-ka ee dib u eegista sameeya markaa ma ogi haddii aad ogtahay sababta ay u noqon karto ama haddii ay tahay Taabashada aqoonsi la'aanta maxaa yeelay si dhakhso leh ayey u socotaa iyo 10da markay si gaabis ah u dhacdo taasi ma dhacdo sidaan ku xaqiijiyey aabbahay. Waan helay
My 6s Plus waa TSMC, haa haa, waa run waxa aad tidhaahdo way dhacaan, laakiin way fiday, sidaa darteed hubaal waxay noqon doontaa bug khafiif ah oo lagu saxo wixii ku soo kordha mustaqbalka.
Aad baad ugu mahadsantahay Luis inaad iisoo jawaabtay oo aad iga saartay cabsida aan ku qabo dusheeda hehe. Runta ayaa ah in aysan aheyn wax raaxo leh laakiin wax laga xumaado maadaama mararka qaar waqti yar ay qaadato in laguu ogolaado inaad dhaqaajiso shaashadda laakiin waxaan rajeynayaa cilladaha 9.1 ee sidan oo kale ah in lagu xallin doono. Waxa aan ogaado waa in batterigu u socdo sida shidaalka gaariga hehe. Laakiin waxaan u maleynayaa inaan nasiib yeelan doonin oo haddii aan mar kale beddelo i sii TSMC. Ma u malaynaysaa inay mudan tahay in wax laga beddelo oo la beddelo iPhones illaa aan taabto TSMC? Sababtoo ah runtii waxaan u maleynayaa in 2% ama 3% aan sidaas la dareemi karin waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii adiga, oo aad haysato TSMC, sidoo kale aad ogaato inay ka dhakhso badan tahay Iphone 6. Mar labaad waad mahadsan tahay jawaabtaadana waan sugayaa. Salaan.
Uma maleynayo inay jiraan kala duwanaansho. Farqiga ayaa runtii la imaan doona 6.1. Batahu waa kuwo aad u wanaagsan waxqabadka iyo baytarigana waa kuwo aad loo arki karo, waxaad arki doontaa sida aad u aragto isbeddelka.
Miyaydaan oran kamarada 6-da ah kama roon tahay kamarada 6-da ah?
Kaamirada iPhone 6s ayaa ka wanaagsan tan 6. Waxyaabaha kale ayaa ah in 12 Mpx uusan aheyn isbadal kufiican hagaajinta si aad u muuqato, laakiin astaamaha kale ee loo siman yahay waxaa iska cad in 12Mx ay ka fiican tahay 8Mpx.
Hagaag, waa guuldaro weyn oo ku filan oo ay duubi karto 4k hadana ma soo saari karto. Inbadan markii waqtigan la joogo aysan jirin siyaabo badan oo loo arko waxa ku jira. Taasi waxay ka yartahay qiimaha ay Apple wax ka qabato, waxaan dhigi lahaa shaashad leh 4k tayo leh. Waxaa jira moobillo ficil ahaan duugoobay sida LG G3 oo haysta tan iyo markii ugu horreysay. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda arrinta batteriga, waxay umuuqataa inay ka baqayaan inay dhigaan batteri leh awood ku filan ... mudane, waxaa jira terminaal ku yaal suuqa oo u dhexeeya 4000 Mah. Caano, maxaad ku qabataa shubka awoodaha ay gacanta ku hayaan? 2750mAh oo loogu talagalay iPhone 6s oo lagu daray, waa ku dhowaad qosol; Hubaal, markaa wax lala yaabo maahan in dadku cabaadaan. Sida dhaqaale ahaan iyo wax ku ool u ah sida isticmaalka kheyraadku yahay, waa wax aan macquul aheyn in awoodahaas xaddidan awgood ay batterigu fiicnaan karaan. Waa inaad wax yar ka fiicnaataa astaamahan oo dhan ka hor intaanad bilaabin wax soo saar cusub, fadlan, maadaama ay horeba suuqa ugu haysteen dhawr nooc. Waxa ugu xunna waa halkii ay ka kordhin lahaayeen awooddooda inay yareeyeen. Sidoo kale aniga ilama fiicna aniga oo ka akhriyay warbaahin badan, "way yareeyeen maxaa yeelay ma jirin meel bannaan", bal aan aragno, waxaan gacmahayga ku haystay baytariyada 3000 mAh oo jidh ahaan ku fadhiya saddex qaybood oo batteriga iPhone 6 Plus ah. Waxaan isticmaalayay iPhone ilaa 3G laakiin waxaa jira waxyaabo ku saabsan Apple oo aanan waligey fahmi doonin, sida kor u kaca sicirkooda iyadoo aan la cabir qaadin waxa ugu xunna waa in, sida ku dhacday dunida guryaha, annaga ayaa mas'uul ka ah tan xumbo mala awaal ah oo ay fuuleen.
ragga guuleysta dijo
hello isii isii 3da farqi weyn ee udhaxeeya iPhone 6s iyo iPhone 5skeyga oo aan uqalmo ama aanan iibsanin 6da? Waad ku mahadsan tahay wax walba, waxaan ahay wade gaari xamuul ah waxaana muhiim ii ah inaan si fiican u soo qaato iPhone-kayga aniga oo qaabilaya iyo sawirada gps iyo ss kale
U jawaab ragga guuleysta